Malaysiya oo xirtay Soomaali loo heysto inuu ka tirsan yahay Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidanka la-dagaallanka argagixisada ee dalka Malaysia ayaa sheegay inay shalay xireen nin Soomaali ah oo 34 jir ah, oo xiriir la leh Al-shabaab. Lama shaacin magaca ninka la xiray.
Ku-xigeenka taliyaha dambibaarista ee dalka Malaysia Datuk Seri Mohd Bakri Zinin oo u waramay Wakaaladda Wararka Bernama ee dalka Malaysia ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen nin 34 sano jir ah oo Soomaali ah, lana xiriirinayo in uu ka tirsanyahay maleeshiyada Al-Shabaab, isagoo xusay in dalka uu soo galay isbuucyo kahor.
Ku-xigeenka Taliyaha dambibaarista ayaa xusay in ay ku raadjoogeen 6 kale lagu eedeeyay inay dalka ku soo galeen qaab ardaynimo iyo dalxiis, kuwaasi oo lala xiriirinayo in ay ka tirsanyihiin Al-Shabaab, haatanna ay ku howlanyihiin sidii raggaasi gacanta loogu dhigi lahaa.
Datuk Seri Mohd Bakri Zinin ayaa sheegay in eedeysanaha xilli sii horreysay lala xiriiriyay fal argagixiso oo ka dhacay Bariga Afrika, waxaana uu si gaar ah ugu diiwaangashanaa booliska adduunka (INTERPOL) oo baadigoob ugu jiray.
Wuxuu tilmaamay in ninka ay xireen shalay barqadii xilliga Bariga Afrika, ayna su’aalo waydiinayaan si ay ugu ogaadaan xogaha ku saabsan xubnaha ka tirsan kooxda ee ku sugan dalka Malaysia. Waa markii ugu horreysay ee Malaysia shaaciso iney xirtay rag ka tirsan Alshabaab.